I-China i-3D Deep Embossed Waterproof edityanisiweyo yeWPC yabavelisi abaHloliweyo kunye nabathengisi ULihua
I-3D Deep Embossed Waterproof edityanisiweyo ye-WPC Decking Decking
Ixabiso:$ 2.35 / UM
Umbala:Amalahle, igqabi lemephu, umthi obomvu, ikofu, njl njl
Ixesha lokukhokhela:10-18 YEentsuku
I-3D ebhalwe nge-WPC Decking
I-2.9m, i-3.6mor eyenziwe ngokwezifiso
Ipuli yokudada, iPaki, njl
● Itekhnoloji entsha ye-3D embossing ye-WPC kumgangatho wokuhombisa ngaphandle, ukuphucula ukuhombisa. Itekhnoloji ye-3D embossing yindlela ekhohlakeleyo yokwenziwa. Umgangatho ngamnye uyafana nomfanekiso oqingqiweyo, kwaye imeko yobugcisa kunye nenqanaba lokubonakalayo liphuculwe kakhulu. I-Classical 3D embossing luphuculo olukhulu kumgangatho weplastiki obonwayo, ongenakuphinda ukrolwe kuphela ngamabhanti kodwa uxhase umkhondo wesiqalo sokukhonkotha.
● Wpc yemveli Ukuhombisa okudityanisiweyo Kulula ukuphulukana neenkozo ngaphezulu, ukuhonjiswa kwe-super embossed kwenza ngcono kunayo nayiphi na imithi ehlanganisiweyo, kungokwemvelo kwaye kunomtsalane, ukubuna okungcono kunye nokukrwela okunganyangekiyo.
● Ukugqwesa okuphezulu kukaLihua Ukuhonjiswa kweWPC unazo zonke izibonelelo zesiko Ukuhombisa okudityanisiweyo , isagcinwa: ayinamanzi, inxamnye ne-UV, imozulu iyanyangeka, inqanda umhlwa, ukuthintela izinambuzane, isondlo esiphantsi, ubomi obude benkonzo njlnjl. Kwaye iibhodi ezinemithambo enzulu zijongeka kwaye ziziva ngathi zinkuni zendalo ngenxa yonyango lwe-3D umphezulu.
Ukudumba nokufunxwa kwamanzi EN 15534-1: 2014 Icandelo8.3.1 Kuthetha Ukudumba: ≤4% ubukhulu, ≤0.8% ububanzi, ≤0.4% ubude Kuthetha Ukudumba: 1.81% ubukhulu, 0.22% ububanzi, 0.36% ubude
Egqithileyo Ukuhanjiswa okukhawulezayo kwe-WPC zokubambelela ngomatshini -Ukuphikiswa kwangaphandle kwe-UV ye-WPC ye-Stair Railing-Lihua
Okulandelayo: Iplastikhi ye-3D ebhalwe ngomlilo yeplastiki yeplastiki edityanisiweyo
Q1: Uthini umgaqo woyilo wembonakalo yemveliso yakho? Zithini iinzuzo?
Q2: Uyintoni umahluko weemveliso zakho phakathi koontanga?
I-Q3: Ngoobani abasebenzi bakho be-R & D? Zithini iziqinisekiso?
Q4: Iyintoni imveliso yakho ye-R & D?
Q5: Zithini iinkcukacha zobuchwephesha beemveliso zakho? Ukuba kunjalo, zeziphi ezizodwa?
I-Q6: Luhlobo luni lwesatifikethi osiphumeleleyo?
I-Q7: Luhlobo luni lwesatifikethi osiphumeleleyo?
I-Q8: Ngabaphi abathengi obapasileyo uhlolo lomzi-mveliso?
I-Q9: Injani inkqubo yakho yokuthenga?
Q10: Uthini umgangatho wabanikezeli benkampani yakho?
Ukuhonjiswa okubhalwe kwi-3D
Ukuhonjiswa okunzulu okumiselweyo
Ukuhonjiswa kweenkuni zangaphandle
3D Embossing Weather Resistance edityanisiweyo Hollo ...
3D Wood Deep Ingqolowa Iithoni Wood edityanisiweyo Soli ...
Umgangatho wangaphandle oMnyama oQinisekisiweyo oDibeneyo
Ihowuliseyili Wood Deep Grain Embossed WPC manzi ...
UV Resistance nzulu Embossed Solid WPC Deck E ...
WPC decking edityanisiweyo, WPC decking ngaphandle, ezenziwe ngomthi yeplastiki edityanisiweyo, WPC nokwadala, Ukutshekisha ngaphandle kwe-WPC, WPC decking umgangatho,